gtalk ၀င်မရ လို ့... — MYSTERY ZILLION
gtalk ၀င်မရ လို ့...
September 2008 edited October 2008 in Networking
:77:အကိုတို ့ရေ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလဲ ကူညီပါနော်...ဂျီတော့ က singing in ဆို ပြီးတော့ ပြုတ်သွား ပြီး တော့ ၀င်လို ့ကိုမရတော့ ဘူး ........အဲဒါနဲ့ဂျီမေး ကနေ၀င်ချပ်နေရတာ.....စက်တစ်လုံးထည်း ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး..အင်တာနက်ဆိုင်တွေ တော်တော်များများမှာ ဖြစ်တာ.......အဲဒါ ဘယ်က ပိတ်ထားလဲ ဆိုတာ သိရင် ပြော ကြပါအုံး နော်......MPT ကိုမေးတော့ လည်း သူတို ့ကတော့ ရတယ်လို ့ပြောတာပဲ ......ဒီက အင်တာနက်ဆိုင်တွေ မှာတော့ ၀င်လို ့ကို မရတာဗျာ..........သိရင်လည်း အမြန်ဆုံးလေး ပြောပေးပါနော်.........:101:
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါ... ရနေပါတယ်... တစ်ခါတစ်လေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
conneciton မကောင်းရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်လေ signing in ရသွားပြီး fri list တွေပေါ်မလာ
တော့ဘူး ။ ဆက်အလုပ် မလုပ်တော့ဘူး ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့် account ကလညး်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ
account နှစ်ခုဖွင့်ထားရင် တစ်ခုက အဲလိုဖြစ်ပြီး signing in မှာပဲရပ်နေတော့တာ ။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ
ဗျာ (ထင်တာပဲ :P)
ဒီနေ့ connection ကြောင့်နဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်မှာလည်း ရပ်နေတယ်ဗျ။ Sign in ကနေ မတက်တော့ဘူး။
အင်တာနက်ဆိုင်တိုင်းမှာ ၀င်လို့၇တာဗျ.....ဘယ်ကပတ်ထားလဲ တော့ မသိဘူးဗျ။
ကော်နက်ရှင်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး ဗျ..ဒေါင်းလုပ် လုပ်တာတောင် 35 k နဲ့40k ကြား မှာ ရတယ် ဗျ။ အင်တာနက်ဆိုင်တိုင်းမှာ ၀င်လို့မရတာဗျ.....ဘယ်ကပိတ်ထားလဲ တော့ မသိဘူးဗျ။
ဒီမှာလဲ ဒီလိုဖြစ်နေတယ်.. reinstall ပြန်လုပ်ပေမဲ့..တူတူဘဲ.:((:((
ရန်ကုန်မှာပဲ ဖြစ်တာထင်တယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ vzo ကျတော့သုံးလို့ ရနေပြန်ရော ...
အနော်တော့ရတယ်...အခုအနော် dial-up သုံးနေတယ်...
(သြော်..ဒီ ဘဲ တော်တော် Q တတ်တာဘဲ:D:D)
ဟုတ်ပါတယ် ... ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး .... gtalk တစ်ခုပဲ ဖြစ်နေတာပါ ....
ကျွန်တော်ကတော့ Freedom နဲ့ gtalk ကို၀င်တယ် .. အဲ့ဒါဆို ရတယ် ဗျ ....
ရန်ကုန်တင် မဟုတ်ပါဘူး။Mandalay မှာလည်း အတူတူပါဘဲဂျာ။
လုပ်ကြပါအုံး။...........vzo တော့ Mandalay မှာလည်း ရတယ်။
skype တော့ တော်တော်လေး သုံးလို. ကောင်းတယ်။...:5::5::5:
:5:မနေ ့ည က ၉နာရီ ခွဲ လောက်က ပြန်ရသွား ပြီဗျ ..........ဘာဖြစ်လို ့လဲ တော့ .........အနော်တို ့လည်း မသိဘူး..........:39:
freedom နဲ့ကျော်ပြီး၀င်လိုက်ပါ။ ရပါတယ်။ pfingo တောင်ပြောလို့ရတယ် gtalk မရတာ သူတို့လုပ်ထားတာလို့ထင်ပါတယ်။
connection ကောင်းရက်နဲ့ gtalk ၀င်လို့မရလို့ပါ (
cometflower,အနော် Freegate version 6.7.7.0 ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်.........
Freegate 6.7.7.0 ဒေါင်းလို့ မရ ဘူး
တနေရာ မှာ ပြန်တင်ပေး ပါ လား
kilo ရေ link ကအကောင်းကြီးရှိပါသေးတယ်...ဒီနေ့ မနက် 1:00 AMမှ အနော်တင်ထားတာပါ.....
download လုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်....ဒါပေမဲ့ အနော် တခြားနေရာမှာပြန်တင်ပေးထားလိုက်မယ်...